Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka sare maraan Flash eryi
> Resource > Flash Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka sare maraan Flash Drive
Ma suurogalbaa in kabsado xogta ka ajende flash drive?
Waxaan lahaa ajende flash drive.I u dhufsaday markii formatting iyo waxa ay muujinaysaa waxa uu leeyahay oo kaliya MB aad u yar oo ka mid ah meel laakiin waa 64GB drive.I la tijaabiyey u formatting marar badan ka dib, laakiin nidaamka use.The lahayn ayaa sheegay in ay jirtey 't buuxiso caawimaad format.Please ah, waxaan weli soo kaban karto, files aan ka? Ma rabo inaan ka yar muddo damaanad ah.
Marka hore, hubi ajende flash drive. Haddii qaab fashilmay, dib u soo kicin files jira. Haddii aadan ku qori xog cusub oo ku saabsan drive ka dib markii files asalka maqan, waxaad iyaga soo kaban karto, dhibaatana ma leh. The files asalka noqday kaliya la arki karin sababo aan la garaneyn. Iyadoo qalab kabashada xogta, si deg deg ah iyaga waxaad ka heli kartaa dib u tayo sameecadda ah, xitaa aad u formatted.
Sidee inuu ka soo kabsado files ka ajende flash drive
Si loo kordhiyo suurtagalnimada ee soo kabashada xogta, doorashada flash ajende drive qalab kabashada xog lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh waa mid aad u muhiim ah. Mid aan lagu kalsoonaan karin distroy doonaa files asalka oo waxaan ka dhigi unrecoverable. Haddii aad weli ay hareerahooda fiiriyeen, waayo, mid, waxaa jooga kuwa is-hoosaysiiya talo: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac , 100% lagu kalsoonaan karo software. Labada of software ogol yahay in aad ka bogsato xogta kala duwan ka ajende drives flash, oo ay ku jiraan sawirrada, video, audio, waraaqaha Xafiiska, PDF, emails iyo in ka badan. Hawsha oo dhan waxaad qaadataa oo keliya dhowr daqiiqadood.
Download version maxkamad free of flash drive software ajende kabashada xogta hoos ku qoran oo qaado isku day ah oo bilaash ah!
Next, aynu isku dayi version Windows ee this ajende flash drive software kabashada xogta wada.
Step1. Dooro habka a soo kabashada: Wizard ama Standard Mode
Waxaa jira labo hababka soo kabashada ay bixiyaan software kabashada xogta: Wizard iyo Standard Mode. Dooro mid ka mid ah sida ay tilmaanta iyo aad tallaabada labaad. Halkan, waxaan dooran Wizard sida tusaale.
Step2. Dooro nooca file aad rabto in aad ka soo kabsado ajende flash drives ah.
Step4. Sahlo baaritaan qoto dheer oo bilow, ama aad ka boodi kartaa haddii aad drive aan la formatted.
Step5. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files lumay on ajende flash drive.
FIIRO GAAR AH: Marka kabsaday files, kuma badbaadin on asalka ajende flash drive ka. Waxaad iyaga ku badbaadin karaan on your computer ama aaladaha kale ee la qaadi karo, waayo, ammaan aawadiis.